Construction ArchitectsBathroom Curtains & Blinds Design & Decorate FlooringFurnitureHome AutomationKitchenLightingOffice Cubicles PaintingRenovateWall Coverings Bedroom Landscaping Renovate & Furnish
Design & Decorate W&S Construction Co.,Ltd.
109 Building A1, Sabei Street, Quarter 6, Kamaryut , Yangon
Construction W&S Construction Co.,Ltd.
Construction လင်းမြတ်သီရိ အလှမွေးငါးနှင့်သစ်ခွဥယျာဉ်
အောင်စည်းခုံဘုရားလမ်း သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးရပ်ကွက် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Landscaping လင်းမြတ်သီရိ အလှမွေးငါးနှင့်သစ်ခွဥယျာဉ်
Landscaping Beaver Group Tel:
အနောက်ေ၇ွှဂုံတိုင် (၄) လမ်း ဗဟန်းမြို့နယ် Category:
Construction Uniclimb Services (Myanmar) Co., Ltd
No,7 G/F Pyinma Street,Say Nyein Qtr,Kyee Myin Dine Township,Yangon
Painting Construction Leo Shine (International) Co.,Ltd
Flooring Legal Consultants Golden Umbrella Construction
Myoma Pat Lane, Dawbon Township, Yangon.
Furniture 123456> Last နောက်ဆုံးရ ဆောင်းပါးများ
ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့ အိမ်၊ အခန်းအလှဆင်နည်း (၅) သွယ်
လူတိုင်းဟာ အစစအရာရာ လိုလေသေးမရှိအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ နေအိမ်မှာ ဇိမ်ကျကျနေထိုင်သူတွေ မဟုတ်ကြသလို အိမ်မှာ လိုအပ်သမျှပြင်ဆင်မွမ်းမံဖို့ ငွေကြေးပြည့်စုံနေကြသူတွေလည်း မဟုတ်ကြပါဘူး။ မူလအစကနေ ပြန်လုပ်စရာမလိုဘဲ…
အလူမီနီယမ်လွှာ (ခဲပတ်စက္ကူ)က ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာတွေအသုံးတည့်သလဲ
အလူမီနီယမ်လွှာ (ခဲပတ်စက္ကူလို့ လူသိများ)ဟာ အစားအသောက်တွေထုပ်ပိုးတာ၊ မီးကင်တဲ့နေရာမှာသုံးရုံ သာမက ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ ကောင်းကျိုးပြုတယ်ဆိုရင် အံ့ဩမိမှာပါ။ ဒီတော့ကာ ဘယ်လိုတွေအသုံးပြု နိုင်တယ်ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။…
တစ်ရက်မှာ မိနစ် ၂၀ အချိန်ပေးရုံနဲ့ တစ်အိမ်လုံးအမြဲသန့်ရှင်းဖို့ နည်းလမ်း ၅ သွယ်
တစ်နေကုန် အလုပ်မှာအချိန်ကုန်နေရတဲ့ ကျမဟာ စနေနေ့မှာပဲ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ အမြဲစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ပတ်အတွင်း စနေနေ့မရောက်ခင်ရင်တွေမှာလည်း ရှင်းလင်းသပ်ရပ်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးကို စိတ်မပျော်ရွှင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။…
သင့်ရုံးခန်းကို လှပသေသပ်ပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်အောင် ဖော်ဆောင်လိုက်ပါလား
အလှအပဆိုတာ လူတိုင်းမြတ်နိုး တတ်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အလှအပ တွေကိုမြတ်နိုးကြတာကြောင့် လူတိုင်း အလှအပတွေနောက်ကို လိုက်ရင်း အဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုတွေကိုလည်း ရရှိလာကြတာ အမှန်ပါပဲ။ ၂၁ ရာစုမှာတော့ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်…
သင့်အိပ်ခန်းကို ဘယ်လိုအရောင် သုတ်မလဲ
အခန်းကို လိမ္မော်ရောင်သုတ် ခြင်းသည် ယုံကြည်သက်ဝင်မှုနှင့် စွမ်းအားရှိခြင်း သင်္ကေတများဖြစ်စေ ၍ အကောင်းမြင်သည့် ခံစားချက် နှင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ပေးစွမ်းစေ သည်။ အ၀ါရောင်ဆေးသုတ်ခြင်းသည် စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းအပြင်…
အခန်းလေးကကျဉ်းနေရင် နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းသလို၊ သက်သောင့်သက်သာလည်းမရှိလှဘူးလို့ တစ်ချို့သောလူတွေက ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခန်းလေးကကျဉ်းနေတာကို ကျယ်သွားအောင်လုပ်လို့မရပေမယ့် အမြင်မှာဖြင့် အခန်းလေးကိုနေရာပိုထွက်လာအောင်…
နံရံပေါ်က သုတ်ဆေးဟောင်းတွေ ပြောင်စင်အောင် ဘယ်လိုသန့်စင်မလဲ
နံရံပေါ်က သင်္ဘောဆေးတွေ ခွာချပစ်ဖို့ကတော့ စေ့စေ့စပ်စပ်လုပ်ပါမှ တော်ကာကျပါမယ်။ အချိန်အတော်များများ ယူရပါလိမ့်မယ်။ နံရံတစ်ဖက်ပေါ်က ဆေးဟောင်း ခြစ်ခွာထုတ်ဖို့ အချိန်ဟာ အခန်းတစ်ခုလုံးကို ခပ်သုတ်သုတ် ရှင်းလင်းတာထက်တောင်မှ…
ဒီကနေ့ကာလမှာတော့ လူတိုင်းလိုလိုမှာ အိမ်နေရင်းမှာတောင် ရုံးအလုပ် လုပ်နိုင်ဖို့ အိမ်တွင်းအလုပ်ခန်းလေးတွေ စီစဉ်ထားတက်ကြပါပြီ။ ရုံးခန်းဆိုမှတော့ စားပွဲရှိမယ်၊ ကုလားထိုင်ရှိမယ်၊ ဖိုင်စင်ရှိမယ်။ ပရင်တာတို့ စကန်နာ တို့တင်ဖို့…
သားသားမီးမီးရယ် ၊ မီးဖိုချောင်ရယ် ၊ မတော်တဆရယ်
တိုက်ခန်းတွဲတွေမှာ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ မီးဖိုခန်းမှန်သမျှဟာ သေးတယ်၊ ကျဉ်းတယ်။ ပြီးတော့ ကျစ်လစ်မှုလည်း ရှိလှပါတယ်။ ချပ်ချပ် ယပ်ယပ်လေးပေါ့။ တစ်ခုရှိတာက မီးဖိုးချောင်သဘာဝအတိုင်း အိမ်မှာတော့ အလုပ်ရှုပ်ဆုံး နေရာဖြစ်သလို…